Rooble oo wadaxaajood ku xalinaya tabashooyinka Jubbaland & Puntland – AfmoNews
Rooble oo wadaxaajood ku xalinaya tabashooyinka Jubbaland & Puntland
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa bilaabi doono dadaalo ay tahay in wax lagaga qabto tabashooyinka Jubbaland iyo Puntland ka qabaan arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya oo maanta ka hadlayay Shirka Somaliya iyo Saaxiibada Caalamka ayaa muujiyay in socdaalkiisu uu la xiriiro arrimaha doorashooyinka ee dalka.
“Safarkeyga ayaa hadda ku wajahan sidaan ku heshiinay Madaxweyne Deni inaan ku gaaro Garoowe, haddii Alle idlmo, oo aan kala hadlo arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale aan soo maro Gaalkacyo, aan ku xijiyo Dhuusamareeb, ka dibna Madaxweyne Axmed Madoobe waxaan ku heshiinay marka uu ku soo noqdo Kismaayo inaan toos u aado halkaa, isaga ayaana uga fadhiyaa.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Rooble.
Madaxweyne-yaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa ku baaqay in gacanta Gobolka Gedo lagu soo celiyo Jubbaland, haddii la doonayo in doorashada Golaha Shacabka ka dhacdo Magaalada Garbahaarey.
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Rooble ugu yeeray in Gobolka Gedo lagu soo celiyo gacanta Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa isna shirka Somali & Partnership Forum ka sheegay in gacanta maamulkiisa lagu soo celiyo, haddii la daneynayo in doorasho ka dhacdo Garbahaarey. Axmed Madoobe ayaa ku celiyay inaanay wax doorasho ahi ka dhici doonin Garbahaarey, iyadoo aanay Jubbaland maamuleyn Gobolka Gedo.
Villa Somalia ayaa ku doodeysa inaanay ka laba labayn doonin in la fuliyo heshiiskii Madaxda Dowladda iyo kuwa Dowlad Goboleedyada ku gaareen Magaalada Muqdisho, haddana waxay ka cago jiideysaa in Jubbaland lagu wareejiyo Gobolka Gedo.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horaan Axmed Madoobe ku qanciyay in shirkii heshiiskaasi lagu gaaray uu kaga qaybgalo Magaalada Muqdisho, taasi bedelkeedana in Ciidamada Dowladda laga soo saari doono Gobolka Gedo, tiiyoo ay muuqato inaanay dowladdu diyaarba u ahayn fulinteeda.